UStella Low usekela-mongameli omtsha wonxibelelwano we-Apple | Ndisuka mac
Kwiinyanga ezidlulileyo, kubonakala ngathi ukuqesha kulawulo oluphezulu lwe-Apple kuye kweza okwexeshana nangona bekukho Isikhundla esingazaliswanga ukusukela oko uSteve Dowling wemka ngo-2019. Sithetha ngesikhundla sikaSekela Mongameli kunxibelelwano lwequmrhu lwe-Apple, isikhundla esele sigcwalisiwe.
Njengoko iApple yanxibelelana nemithombo yeendaba BuzzFeed, UStella Low usekela-mongameli omtsha wonxibelelwano lweshishini lwehlabathi, elimele ukulawulwa kwemizamo ye ubudlelwane boluntu kwiapile lonke ihlabathi
UStella, obesuka eCisco, uzisa, ngokuka-Apple, "ngamava akhe amangalisayo kunye nobunkokeli kumaqela onxibelelwano akwa-Apple" kwaye uya kuba noxanduva sebenza namajelo eendaba, abahlalutyi, abachaphazelayo, abathengi kunye nabasebenzi.
Ukubhengezwa kwesi sikhundla kuza nje i-7 iminyaka emva kokuhamba kukaKatie Cotton zesikhundla esinye. UKatiie wathatyathelwa indawo USteve Dowling de kube kumke ngo-2019.
Ukususela kumhla, esi sikhundla sihleli ehlanganiswe yintloko yentengiso, UPhill Shiller nasemva komhlala phantsi, Wadlula ezandleni zikaGrez "Joz" Josniak.
Njengoko benditshilo apha ngasentla, uStella Low uza eApple evela eCisco, apho wayekhona usekela mongameli omkhulu kunye nomphathi wonxibelelwano kwinkampani. Ngaphambili, wakhokela unxibelelwano lwehlabathi kwi-EMC.
UStella uza kugcwalisa indawo ebonakala ngathi iqalekisiwe kule minyaka idlulileyo kwaye uza kunika ingxelo ngqo kuTim Cook. Oku kuqesha iza ngexesha elibalulekileyo leApple, xa sele iqale idabi elisemthethweni lokulwa neMidlalo ye-Epic, idabi elityhila esidlangalaleni iinkqubo zenkampani, izivumelwano ezilungileyo kwiVenkile yeApple kwiinkampani ezithile (iHulu), ukuphelelwa lithemba okubangelwe yinkampani ethi iNetflix iyeke ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo. … Ebonisa ukuba iApple inebha ephindwe kabini yokulinganisa njengoko unomdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UStella Low usekela-mongameli omtsha we-Apple kwezonxibelelwano
Sibona ii-ins kunye nokuphuma kokurekhodwa kwesiqendu sesithathu se "The Coast Mosquito."